For the moment. | ZAYYA
← ချမ်းမြေ့မှု ရှိမှ ဘာဝနာ ဟု ဆိုပါမည်
ဘာသာများနှင့် လူ →
Ted Viramont: အိုခေ။ ဒါဆို ကျနော် စကားပြောင်းမေးပါမယ်။ မတရားမှု၊ တရားမျှတမှု တို့ အပေါ် ချင့်တွက် ရပ်တည်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
Osho: ကိစ္စ တစ်ခုအပေါ် -“သင့်တယ်” “မသင့်ဘူး” လို့လည်း တရားသေ မမှတ် ထားသင့် ဘူးဗျ။ သူ ကြုံဆုံတဲ့ ကိစ္စအပေါ် အသိ အပြည့်အဝ ရှိရင် – အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်မှုက ရှိပြီးသားပဲ။ အဲ့ တစ်ခဏမှာ ခင်ဗျား တိုက်ခိုက်မယ် ဆိုစို့ ~~ ဒါဆို တိုက်ပါ- အပြည့်အဝ တိုက်ခိုက်ပါ။ စူးစိုက်ပြီး – “တိုက်ခိုက်မှု က တိုက်ခိုက်မှု” သက်သက် အတွက်သာ တိုက်ပါ။ ယုံကြည်မှု၊ ဝါဒ ကြောင့် တိုက်ခိုက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အယူအဆ အမြင် တစ်ခု ကို ကာကွယ်ဖို့ တိုက်ခိုက် တာမျိုး မလုပ် ပါနဲ့။ ခဏဟာ ခဏ အတိုင်း အတိ အကျ ရှိပါတယ်။ အဲ့တစ်ခဏ အတိုင်း ပြည့်ဝ သိနေရုံလေး။ ရှင်သန် နေရုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခဏတိုင်း နိုးကြားနေဖို့ ပဲ လိုအပ် တယ်။
~ Interview with Madras Pioneer, Oregon.
May 10th 2012 @1:03 PM